FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABRAHUAHUA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labrahuahua
Alika mifangaro mifangaro Chihuahua / Labrador
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) amin'ny 5 taona— 'Manana Chihuahua / mavo Lab mifangaro, (Neny no Lab). Nanavotra azy izahay fony izy 3 volana ary 4lbs ihany. Namidy tamiko ho fifangaroan'ny Chihuahua izy nefa toa laboratoara tamin'izany fotoana izany. 5 taona izy izao, 30 pounds. Sahabo ho 22 santimetatra ny halavany manomboka amin'ny hatoka ka hatrany am-pototry ny rambony. Ny valan'ny tratrany dia lehibe, Lab rehetra, fa rehefa mandry izy dia milofo any fa tsy izy. Sahirana izahay mahita palitao sy lobaka mifanaraka amin'ny tratrany. Peppie dia alika mahagaga, tena marani-tsaina, be fitiavana nefa miaro be loatra, azony ilay olana mitoloko sy mivava Betsaka ny an'i Chihuahua no fantatra, i Peppie ihany no manao izany amin'ireo olon-tsy fantatra, tabataba eo akaikin'ny varavaranay, ary hodi-kazo Lab sy alona alika lehibe io. Tsy manana ny hodi-kazo alika kely izy. Ankoatr'izay (izay tohizantsika miasa miaraka aminy) Peppie no alika mahatalanjona sy be fitiavana ary voatahy isika tonga teo amin'ny fiainantsika. '
Ny alika Labrahuahua dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Sukhie the Chihuahua / Labrador Retriever mix (Labrahuahua) amin'ny 1 taona— Alika mpamonjy i 'Sukhie. Nentiko tany amin'ny toeram-pialofana biby izy tamin'izy 8 herinandro, ary efa herintaona izy izao. Tena marani-tsaina izy, sariaka, milalao ary mahatoky. Tiany ny misolelaka, ary manenjika baolina tenisy (toy izao no nahazoany ny ankamaroan'ny fampihetseham-batany, mila mihazakazaka izy). Izy dia manao tetika maro hanaikitra ny fromazy. Ny hafetsena tiako indrindra dia ny hibitsibitsika! Milalao kilalao mitsitokotoko be foana izy! Manana toetra mahafinaritra izy, milamina matetika fa afaka mitaintain-doha sy mientanentana kely indraindray amin'ny olona sy alika ary anaty fiara sasany. Milanja 35 lbs izy. Mampitsiky ny foko isan'andro izy! '
Hulk the Chihuahua / Labrador Retriever mix (Labrahuahua) amin'ny 7 volana mitafy satroka Santa— 'Ity i Hulk dia fifangaroan'ny Chihuahua / Labrador izy. Tsara toetra izy. Tiany ny milalao fakana kilalao na milalao ao ambanin'ny lamba firakotra miaraka amiko. '
Neiko the Lab / Chihuahua mifangaro (Labrahuahua) toy ny alika kely— 'Ny anaran'ilay alikako dia Neiko, izy tokoa no famaritana hybrid. Tsy ho nieritreritra mihitsy aho fa ny laboratoara mavo sy Chihuahua 5lbs dia mety nahavita alika kely toy izany na dia mahafatifaty toa azy aza. Neiko dia hendry izaitsizy poti voaofana vao 6 herinandro monja! Ny lokony dia avy amin'ny raim-pianakaviana (Chihuahua) fa ny tena mampiavaka azy dia avy amin'ny Lab mahafinaritra avokoa. Tamin'ny 5-volana dia nilanja 49lbs. Tena liana te hahafantatra ny halehibeny ho azony aho. Tsy nino mihitsy aho fa marina izany mandra-pihaonako ireo tompony talanjona talohany izay namela ahy hahita ny ray sy ny reny. Nilaza izy ireo fa lozam-pifamoivoizana tokoa ary samy gaga izy roa satria samy nanana ny alika nandritra ny taona maro. Nitondra fifaliana lehibe ho ahy sy ny vadiko izy. '
Neiko the Lab / Chihuahua mix (Labrahuahua) toy ny alika kely
Fangaro Neiko the Lab / Chihuahua (Labrahuahua) rehefa alika kely mipetaka amin'ny tany
Neiko the Lab / Chihuahua mix (Labrahuahua) toy ny alika kely ao amin'ny fandroana
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) amin'ny faha-5 taonany natory teo ambony seza
Mifangaro Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua (Labrahuahua) misotro mandritra ny diany— 'Afaka mahita ny laboratoara ao aminy sy ny halavan'ny vatany ianao'
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) miala sasatra miaraka amin'ny tompony
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) amin'ny 5 taona— 'Izy no mpitifitra an-tsokosoko, tia mikitika izy! Ny fotoana fatoriana eo am-pandriana no fotoana tiany indrindra! '
teacup yorkie afangaro amin'ny chihuahua
sarina alika kely mastiff anglisy
sarin'ny pitbull husky mix
dachshund Maltese afangaro alika kely hamidy